SABABAHA LA JOOJIYO - 802Quits
Bogga ugu weyn » Vermonters » SABABAHA LOO JOOJIYO
SABABAHA LA JOOJIYO WANAAGSAN
Waa maxay sababta ugu wanaagsan ee loo joojin karo sigaar cabista, uuskuusashada ama isticmaalka waxyaabaha kale ee tubaakada? Waxaa jira sababo badan oo loo joojiyo. Dhammaantood way fiican yihiin. Adiguna kaligaa ma tihid
U hel caawimaad ku habboon oo bilaash ah sidii aad sigaarka iyo tubaakada kale ugu joojin lahayd adiga iyo ilmahaaga.
Waxaa jira sababo badan oo loo joojiyo sigaar cabista ama isticmaalka waxyaabaha kale ee tubaakada. Ma aha oo kaliya joojinta sigaarka, sigaarka elektaroonigga ah ama tubaakada kale inay horumariyaan caafimaadkaaga, waxay kaa caawin kartaa inaad dareento fiicnaan iyo inay ku siiso tamar badan oo aad kula gasho caadooyinka kale ee caafimaadka leh sida jimicsiga.
In kasta oo dad badani ay ka walaacsan yihiin miisaanka oo kordha markay joojiyaan, waxaa muhiim ah in maanka lagu hayo dhammaan faa'iidooyinka ay leedahay joojinta sigaar cabista ama tubaakada kale iyo inta aad u qabanaysid caafimaadkaaga markaad joojiso. Sababtoo ah sigaar cabista saameynaya jirka oo dhan, jirkaaga oo dhan ayaa waxtar leh.
Haddii aad ka walaacsan tahay miisaankaaga oo kordha, ama aad rabto inaad wax ka barato waxa la cuno si loo joojiyo damacyadaada, halkan waxaa ku yaal tilmaamo kaa caawin kara inaad ka hortagto kororka miisaanka oo aad horumariso caafimaadkaaga!
JIDHKAAGA KU NAQUUN CUNTO CAAFIMAAD LEH
Xusuusnow inaysan ku saabsaneyn inaad naftaada wax u diiddo - ee waa quudinta jirkaaga waxa uu u baahan yahay inuu noqdo sida ugu fiican. Cunnooyinka caafimaadka qaba kaliya ma caawin karaan ka hortagga miisaanka oo kordha, waxay noqon karaan kuwo macaan! 1 2
Cun miraha iyo khudradda badan.
Qorshee cuntadaada iyo cunto fudud oo caafimaad leh si aadan weligaa gaajo u gaajoon. (Way fududahay inaad qabato cuntooyin aan caafimaad qabin markaad gaajooto.)
La imow liistada cunto fudud oo caafimaad leh oo aad jeceshahay (tusaale ahaan, iniinyaha gabbaldayaha, miro, salool aan daaqeysnayn, qashin-wadayaal jilicsan oo jiis ah, ukun shiidan leh subagga looska).
Biyo badan cab oo xaddid cabbitaannada leh kalooriyada sida aalkolada, casiirka sonkorta leh iyo soodhaha.
U fiirso cabirkaaga qaybtaada. Saxanka Cunista Caafimaadka leh2 hoosta ayaa kaa caawin karta inaad qorsheyso tirada qaybtaada.
Ujeeddo inaad haysato saxankaaga cashada badh noqo miraha ama khudradda, 1/4 saxanka waa inay noqdaan borotiin caato ah (tusaale, digaag, kalluun dubay, chili) iyo 1/4 saxanka inay noqdaan karbo caafimaad leh sida baradhada macaan ama bariiska buniga ah.
Haddii aad leedahay “ilig macaan,” ku koobnow macmacaanka hal mar maalintii oo xaddid cabbirka macmacaanka (tusaale ahaan, badh koob oo jalaato ah, nus koob oo lows ah oo lagu qasay miro la qalajiyey & shukulaatada madow, 6 oz. Yogurt Greek gabal midho cusub, 1 jibbaaran oo shukulaato madow ah). Ka raadi internetka "fikradaha macmacaanka caafimaadka leh."
JIIFKAAGA KUGU ABAAL-GELI Maalin kasta
Dhaqdhaqaaqa jirka, sida socodka, jardiinada / shaqada beerta, Baaskiil wadista, qoob ka ciyaarka, culeyska qaadista, majarafad, isboortiga oo laga gudbo, kabaha barafka, ayaa kaa caawinaya siyaabo badan1:
Waxay kaa caawineysaa hagaajinta niyaddaada
Waxay kaa caawinaysaa inaad kaa ilaaliso inaad miisaankaaga kordho
Waxay hoos u dhigeysaa heerarka sonkorta si looga hortago sonkorowga (ama sonkorowga loo xakameeyo)
Jidh ka dhigaysa mid xoogan
Lafahaaga iyo kala-goysyadaada caafimaad buu ka dhigayaa
Ujeedo hadaf ah inaad kudarto 5 daqiiqo oo dheeri ah oo jimicsi ah waxa aad horey usameysay maalin kasta ilaa aad kahesho saacad maalintii. Xusuusnow, jimicsiga jirku wuxuu noqon karaa wax kasta oo kugu kiciya inaad ku dhaqdhaqaaqdo dhidid.
KU DOORO HAWLAHA AAN KA CUNAYN CUNISTA SI AY KUU CAAWISO LAGU DAGAALANAYO CARRUURTA
Caadaysiga afka-ka-afka ee isticmaalka tubaakada - gaar ahaan sigaar cabbidda - way adkaan kartaa in laga tago sida tubaakada lafteeda. Waa wax duufsan in lagu beddelo sigaarka, sigaarka elektarooniga ah ama qalinka uumiga cuntada si loo qanciyo caado-ka-afka. Dadka qaarkood ee tubaakada isticmaala waxay u arkaan waxtar inay ku calashaan caws ama xanjo aan sonkor lahayn, ama waxay sameeyaan wax cusub oo ay ku mashquuliyaan gacmahooda.
Ha u oggolaan in walwalka ah helitaanka xoogaa rodol ah ay kaa niyad jabiso inaad joojiso. Markaad joojiso ma aha oo kaliya inaad tilaabooyin ku darsato noloshaada sanado, waxaad hagaajineysaa tayada noloshaada waxaadna dadka ka ag dhow ka ilaalinaysaa qiiqa sigaarka. Ha ka waaban inaad la hadasho daryeel caafimaad bixiyahaaga haddii aad ka welwelsan tahay miisaanka oo kordha.
Waa kuwan qaar ka mid ah ilo dheeri ah oo ku saabsan dhimista miisaanka ama ilaalinta miisaanka caafimaadka qaba:
CDC: Miisaanka Caafimaadka
CDC: Cunnooyinka Caafimaadka leh ee Culeys Caafimaad qaba
Qiiqa tubaakada caafimaad uma ahan qof walba oo reerkaaga ah. Laakiin waxay si gaar ah waxyeello ugu leedahay carruurta sambabaha ay weli korayaan iyo dadka qaba cudurka neefta, kansarka, COPD iyo cudurrada wadnaha. Xaqiiqdii, cabbista sigaarka iyo u-soo-gaadhista qiiqa sigaarka ayaa ka mid ah kuwa ugu badan uguna halista badan ee neefta kiciya.
Generalka Dhakhaatiirta Qalliinka Mareykanka wuxuu leeyahay waxaa jira maya qiiqa sigaarka cabba Qofkasta, u dhawaansha sigaar cabista waxay la mid tahay inay sigaar cabayaan, sidoo kale. Xitaa soo-gaadhista gaagaaban ee sigaarka lagu cabo waxay leedahay waxyeelo dhakhso leh, sida halista sii kordheysa ee cudurka wadnaha, istaroogga, sonkorowga iyo kansarka sanbabada.
EEG DHAMMAAN SIDOO AY U QAADO SIGAARKA LABAAD QOFKAAGA IYO ADIGAA JECEL
Carruurta iyo dhallaanka waxay leeyihiin sambabo yaryar oo wali koraya. Waxay xitaa halis weyn uga jiraan sunta qiiqa sigaarka lagu cabo.
Markay carruurtu ku neefsadaan qiiqa, waxay sababi kartaa dhibaatooyin caafimaad oo la jooga noloshooda oo dhan. Kuwaas waxaa ka mid ah dhibaatooyinka sida neefta, boronkiitada, oof-wareenka, infakshannada dhegaha ee soo noqnoqda iyo xasaasiyadda.
Dadka qaangaarka ah ee qaba cudurka neefta, xasaasiyadda ama boronkiitada, qiiqa sigaarka ee sigaarka lagu cabayo ayaa astaamaha ka sii daraya.
Carruurta ay waalidkood ama daryeelayaashoodu sigaar cabbaan waxay laba jeer uga dhow yihiin inay u dhintaan Cudurka Dhimashada degdegga ah ee Dhallaanka (SIDS).
Xayawaanada neefta qiiqa sigaarka qaata waxay leeyihiin xasaasiyad badan, kansar iyo dhibaatooyin sambabaha marka loo eego xayawaannada ku nool guryaha aan sigaar cabbin.
Cawaaqib xumada caafimaad ee ka dhalata soo-gaadhista qiiqa tubaakada: Warbixinta Dhakhtarka Qalliinka Guud
Qoyskaaga ayaa noqon kara dhiirigelin weyn inay kaa caawiyaan inaad joojiso sigaar cabista, sigaarka elektaroonigga ah ama waxyaabaha kale ee tubaakada laga sameeyo. U oggolow inay ku dhiirrigeliyaan oo ay kugu taageeraan dadaalladaada joojinta.
Ma doonayo 3-da gabdhood, ninkeyga ama 2 ayeeyood oo ay ayeeyo u tahay inay maraan iyagoo daawanaya aniga oo u dhimanaya cudur xun, si xun! Soddon maalmood oo aan sigaar lahayn iyo maalmo kale oo badan oo hore u sii socda! Waan sii farxi kari waayey. 🙂
Marka lagugu ogaado jirro waxay noqon kartaa wicitaan soo kicinta cabsi leh oo kugu dhiirrigeliya inaad qaaddo tallaabooyinka ugu horreeya ee xagga barnaamijka lagu joojinayo sigaar cabista ama tubaakada kale. Haddii joojinta ay hagaajin karto cudurkaaga ama kaa caawin karto inaad si wanaagsan u maamusho astaamahaaga, faa'iidooyinka caafimaad ayaa noqon kara kuwa ballaaran.
Markii aan joojiyay 17 sano ka hor, ma ahayn markii iigu horreysay ee aan isku dayo inaan joojiyo, laakiin waxay ahayd markii iigu dambeysay uguna dambeysay. Kaliya waxaa lagaa helay boronkiitada dabadheeraad ah iyo marxaladda hore ee cudurka 'emphysema', waan ogaa inay taasi ahayd digniintii iigu dambeysay. Waxaan ogaaday sida nasiibkeygu yahay inaanan la ii sheegin inaan qabo kansarka sanbabada.
Ilaali caafimaadka ilmaha
Haddii adiga ama lammaanahaagu aad uur leedahay ama aad uur leedahay, hadda waa xilli ku habboon inaad sigaarka joojiso. Joojinta sigaarka kahor, inta lagu jiro ama kadib uurka waa tan ugu fiican hadiyad aad siin karto naftaada iyo ilmahaaga.
Waxay yareysaa fursada aad uur ku yeelan karto
Waxay siisaa ilmahaaga ogsijiin badan, xitaa kadib 1 maalmood oo keliya oo uusan sigaar cabbin
Waxay abuurtaa khatar yar oo ah in ilmahaagu goor hore dhasho
Waxay hagaajinaysaa fursadda ah in ilmahaagu kula iman karo cusbitaalka adiga
Waxay yareysaa dhibaatooyinka neefsashada, xiiqda iyo jirrada carruurta
Waxay yareysaa halista Cudurka Dhimashada degdegga ah ee Dhallaanka (SIDS), infekshinka dhegaha, neefta, boronkiitada iyo oof-wareenka
Caafimaadkaaga ayaa sidoo kale muhiim u ah ilmahaaga.
Caanaha naaskaaga ayaa ka caafimaad badnaan doona
Dharkaaga, timahaaga iyo gurigaaguba si fiican ayey u urin doonaan
Cuntadaadu way dhadhamin doontaa
Waxaad heli doontaa lacag badan oo aad ku isticmaali karto waxyaabo kale
Waxaad u badnaan doontaa inaad ku dhacdo cudurka wadnaha, istaroogga, kansarka sanbabada, cudurada sanbabada ee joogtada ah iyo cudurrada kale ee la xiriira qiiqa
Hel caawimaad BILAASH ah oo lagu joojiyo sigaar cabista ama tubaakada kale oo lagu kasbado abaalmarinta kaarka hadiyadaha! Wac 1-800-QUIT-HADA inaad la shaqeysid Tababaraha Joojinta Uurka ee sida gaarka ah u tababaran waxaadna kasban kartaa $ 20 ama $ 30 kaar hadiyad ah wicitaan wicitaan kasta oo dhameystiran (illaa $ 250) inta aad uurka leedahay iyo kadib. Waxbadan baro oo bilow inaad kasbato abaalmarino.
Maamuus Qofka Lumay ee Lumay
Waayitaanka qof aad jeceshahay waa dhiirigelin muhiim u ah joojinta sigaarka. Kuwa kale ee ku hareeraysan Vermont waxay joojiyeen inay sharfaan nolosha qof aad jeceshahay.
Aabbahay wuxuu u dhintey dhammaan arrimaha caafimaadka la xiriira sigaarka. Hooyaday wali way nooshahay, laakiin qalliin wadnaha ah oo furan ayaa loogu sameeyay sigaar cabbideeda. Nasiib darrose, waxaan sidoo kale qabaa arrimo caafimaad oo la xiriira sigaar cabbista: lafo-beelka, burooyinka burooyinka codkayga iyo COPD. Tani waa maalintii iigu horreysay, runti waxaan dareemayaa wanaag iyo xoog. Waan ogahay inaan sidan sameyn karo. Waan ogahay inaan uqalmo inaan sameeyo.
Markaad joojiso sigaar cabista, qashin-qubka ama waxyaabaha kale ee tubaakada, ma aha oo keliya caafimaadkaaga inaad keydineyso. Waad la yaabi doontaa markaad aragto waxaad awoodo inaad sameyso markaad lacag ku bixinaynin sigaarka ama sigaarka elektarooniga ah, tubaakada cunista, buuriga ama sahayda uumiga.
Waxaan cabi jiray baakad maalintii, taas oo qaali igu noqotay. Marka markaan joojiyay, waxaan bilaabay inaan maalintii $ 5 ku rido weel jikada aan ku jiro. Waan iska joojiyay 8 bilood hadda, markaa waxaan haystaa qayb fiican oo isbeddel ah oo la keydiyay. Haddii aan ka dhigo sanad la joojinayo, waxaan ku qaadanayaa gabadhayda fasax lacag.
Diyaar ma u tahay inaad qaado talaabada ugu horeysa?
Ku abuur qorshe ka-tagid khaas ah 802Quits maanta!
Caawinaad Waa Halkan>